A Guide To The Types na Ngwaọrụ Iji Malite ingmepụta Online Video ọmụmụ | Martech Zone
Sunday, Eprel 11, 2021 Tọzdee, Disemba 30, 2021 Hritusharma
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịme nkuzi na ntanetị ma ọ bụ usoro vidiyo ma chọọ ndepụta aka nke ngwa ọrụ na atụmatụ niile kachasị mma, mgbe ahụ ị ga-ahụ ntụzịaka kachasị mma. N'ime ọnwa ole na ole gara aga, ejiri m aka m nyochaa ma nwalee ọtụtụ ngwaọrụ, ngwaike na ndụmọdụ iji mepụta nkuzi na-aga nke ọma na nkuzi vidiyo iji ree na ịntanetị. Ma ugbu a, ị nwere ike inyocha ndepụta a iji chọta ihe ịchọrọ kachasị (enwere ihe maka mmefu ego niile) wee rịa ngwa ngwa iji mepụta usoro ọzọ gị.
Lelee anya, bido na nke kachasị gbaa ume ma gụọ maka na akwadoro m ihe pụrụ iche nye gị, achọrọ m ijide n'aka na ị gaghị echefu ya maka ebumnuche ọ bụla.
Ihe Nlekọta Ihe Nlere nke Video Online
Typedị vidiyo mbụ ị ga - achọ imepụta maka nkuzi gị ma ọ bụ nkuzi ya bụ igosi ihe ị hụrụ na ntanetị kọmputa gị (slides, programmụ ma ọ bụ weebụsaịtị) ma jiri ya kwuo okwu na ya. Teknụzụ nke ahụ bụ ihe chọrọ obere ego, mana ihe egwu dị bụ na ọ bụrụ na ịmasị ka ọtụtụ ndị m na-ahụ na YouTube, ị ga-akwụsị ịmepụta vidiyo na-agwụ ike nke ọ na-enweghị onye ga-ekiri.
Nke a bụ ya mere o ji dị mkpa:
Na-elekọta nke mmezu nke slide
Na-arụ ọrụ nke ukwuu n'iji olu gị eme ihe
Fanye animations na pụrụ iche utịp
Mee mkparị obi ọjọọ nke nkwụsị na akụkụ na-enweghị isi
RecordCast Screen edekọ
Site na ngwanrọ kachasị dị mfe na nke zuru oke iji bido. RecordCast Screen edekọ bụ kensinammuo, atụmatụ-ọgaranya, na 100% free. Ihe ọ bụla ị na-eji PC ma ọ bụ Mac, ị nwere ike ijikwa ya na kọmputa gị nke ọma ebe ọ bụ na ọ dabere na weebụ. Ọ bụ ezie na ọ bụ n'efu, ọ bụ watermark-free, ad-free, na nnukwu-definition ndekọ. Ọ nwere ike na-efu efu gị toolbox. Ke adianade do, ọ na-enye wuru na-video nchịkọta akụkọ na a ọgaranya n'ọbá akwụkwọ nke ọcha, ederede, animations, overlays, ikwu n'ụzọ, na ọtụtụ mgbanwe edezi atụmatụ dị ka gbawara n'etiti, mbugharị na / apụ, ịkpụ, wdg RecordCast bụ n'ezie a oké ihe kwesịrị ekwesị n'ihi na ndị chọrọ imepụta ihe ọmụmụ vidiyo ma ọ bụ nkuzi dị mfe.
Banye maka RecordCast n'efu
Efu dị mma ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịmepụta vidiyo ngwa ngwa, ọkachasị site na ịza ajụjụ na weebụsaịtị ma ọ bụ ngwanrọ. Ọ na - enye gị ohere idekọ onwe gị ka ị na - ekwu okwu, na - enye ntụzi aka, ma na - egosi gị okirikiri mara mma ị nwere ike idowe ebe ọ bụla masịrị gị. Ọ dịkwa oke uru maka ịkekọrịta vidiyo vidiyo ngwa ngwa na ndị ọrụ ibe gị ma ọ bụ ndị ahịa. Akaụntụ dị mkpa bụ n'efu ma ha nwekwara onyinye azụmahịa na onyinye.
Debanye aha maka ụgwọ n'efu
Ọ bụrụ na ị jiri ngwaọrụ Apple, Ihu mmiri bụ ngwọta ị chọrọ: Ndekọ oké Nkuzi na-eme ọkara ọkachamara video edezi. N'agbanyeghị atụmatụ ndị a dị elu, ọ dị oke mfe ma kensinammuo iji ya, ọ nwere ezigbo nzacha na vidiyo na nsonaazụ ụda ahụ dị ukwuu. Otu ikikere na-amalite na $ 129.
Download a Ikpe nke Screenflow
Igwe okwu Maka Ogo Audio
Igwe okwu Lavalier
BOYA BY-M1 bụ igwe okwu mkpịsị aka omnidirectional, dị mma maka iji vidiyo, emere maka ekwentị, igwefoto mpiaji, eserese vidiyo, ihe ndekọ ọdịyo, PC, wdg The flaapu nwere igwe na-ahụ maka polar omnidirectional maka mkpuchi ogo 360. O nwere eriri 6-mita ogologo (nke nwere 3.5 mm jack na gold) iji jikọta ya na kamera vidiyo, ma ọ bụ smartphones etinye nso na ọkà okwu. Ọnụ: $ 14.95
The USB Sennheiser PC 8 A na-atụ aro ma ọ bụrụ na ị na-agagharị n'ọtụtụ na ịchọrọ ịdekọ (karịsịa ngebichi) na gburugburu ya na ụda mkpọtụ dị mma. Ọ bụ nnọọ ìhè na-enye ezi ọdịyo maka ma E na music; igwe okwu, ịnọ nso n’ọnụ, na-enwe mmetụta ọsọ ọsọ ma doo anya na mmegharị nke olu na mkpochapụ mkpọtụ ihere. Ejiri igwe okwu na njikwa olu na eriri, ọ dịkwa ezigbo mkpa na ọnọdụ ọrụ ọfụma. N'ụzọ doro anya, enwere ike iji ya jikọọ PC / Mac ma ọ bụghị na ama ma ọ bụ igwefoto mpụga. Ọnụ: $ 25.02
The Rode VideoMic Rycote bụ egbe gbọmgbọm igwe nke na-enye ya ohere ịnata ọdịyo na ụzọ ntụgharị na-enweghị ijide mkpọtụ akụkụ. Ya mere, ọ bụ nhọrọ dị oke mkpa na N'èzí ebe isiokwu ahụ na-agagharị nke ukwuu, na-agbanwekarị (dịka ọmụmaatụ, mgbe ị nwere ndị okwu 2/3) ma ọ bụ iji igwe okwu lavalier adịghị atụ aro maka ihe ịchọ mma. Enwere ike itinye ya na igwefoto SLR ngwa ngwa yana, yana ndị nkwụnye ekwentị, ị nwekwara ike jikọọ ya na ekwentị ma ọ bụ mbadamba maka ndekọ ndekọ ego dị ala. Ọnụ: $ 149.00
Free Video edezi Software
OpenShot bụ a free video nchịkọta akụkọ dakọtara na Linux, Mac, na Windows. Ọ bụ ngwa ngwa mmụta na ihe ijuanya dị ike. Ọ na-enye gị ọrụ ndị bụ isi maka ịme nkwụsị na mgbanwe na vidiyo gị, yana egwu na-enweghị njedebe, mmetụta pụrụ iche, ntụgharị, ngwa ngwa na mmegharị 3D. Akwadoro ma ọ bụrụ na ị na-amalite ọkọ ma na-achọ ihe dị ọnụ ala na ngwa ngwa ịmụ ihe.
Onye nchịkọta akụkọ vidiyo FlexClip
Ọ bụ kpam kpam online na ihe nchọgharị dabeere na software. Onye nchịkọta akụkọ vidiyo FlexClip abịa na njirimara niile ịchọrọ iji mepụta vidiyo dị ukwuu, na-enweghị ahụmịhe chọrọ. Dezie obere vidiyo nke nha niile na ihe nchọgharị ahụ n'enweghị nsogbu nke mgbatị na-adịghị mma. Na-agba ọsọ nke echiche? Chọgharịa gallery nke vidiyo ndebiri ahaziri iche nke ndị ọkachamara dabara maka ụlọ ọrụ gị. Ha echebarala onye ọ bụla echiche: site na vidiyo maka ọwa YouTube ka ọ gụọ nkuzi ma ọ bụ vidiyo ọzụzụ. Ọ dị mma ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịme ngwa ngwa.
Ọnụ: freemium (mbupụ n'efu na 480p, wee si na 8.99 $ / ọnwa); Nwere ike ịga AppSumo iji nweta nsụgharị nke ndụ ya n'oge a.
Debanye aha maka FlexClip
Shotcut bụ sọftụwia na - akwụghị ụgwọ, a na - arụ na Linux, macOS, na Windows, nweere onwe ya ma mepee, nke na - enye gị ohere ịmepụta vidiyo, jikwaa na mbupụ ha n'ọtụtụ ụdị. The interface bụ mgbanwe na kensinammuo. A na-ahazi iwu ahụ nke ọma, yana ọtụtụ nzacha na ntụgharị dị mkpa. Vasatail, ọ nwere ezigbo mmụta usoro ma dị mfe iji. Nwelite oge niile, na-ewebata atụmatụ na arụmọrụ ọhụrụ, na-aga n'ihu na-emewanye arụmọrụ ya.
Ọ na-enye atụmatụ zuru ezu dị ka ngwanrọ azụmahịa. Ọ na-akwado ọtụtụ formats na mkpebi ruo 4K. Ọ na-enye njikwa dị elu maka vidiyo na ọdịyo, mmetụta, usoro iheomume na ndezi ọtụtụ, yana mbupụ omenala na ọtụtụ profaịlụ akọwapụtara.
Ebee Kwusaanụ Online vidiyo Agụmakwụkwọ Gị
Mgbe imesịrị mepụta vidiyo gị, oge eruola ka ị mee ka ndị na-ege gị ntị nwee "kụọ" ha n'ọnụ ụzọ (nke anyị ga-atụle na ngalaba na-esote) site na nke ị na-ewepụta usoro vidiyo gị. Mgbe ahụ ka anyị lee ebe anyị nwere ike ibipụta usoro ọmụmụ anyị n'ịntanetị.
YouTube - Ọ dịghị mkpa iwebata n'ihi na ọ bụ ihe na-eduga n'elu ikpo okwu na vidiyo ụwa. Ọ nwere interface dị mfe, na-enye gị ezigbo ihe nkiri nkiri, ma nke kachasị mma, ọ bụ 100% n'efu. Ya mere, ọ bụ ezigbo ihe ngwọta naanị ma ọ bụrụ na ịnweghị mmefu ego itinye ego ma ọ bụ chọọ ibipụta vidiyo ngwa ngwa. Ihe na-adịghị mma bụ na YouTube ga-etinye mgbasa ozi na vidiyo gị, nke ahụ anaghị enyere aka mepụta onyonyo ọkachamara (yana nwedịrị ike ịbugharị ndị na-asọmpi gị). Na nkenke: jiri ya ma ọ bụrụ na ịnweghị nhọrọ ndị ọzọ ma ọ bụ ọ bụrụ na ịchọrọ idozi ọwa YouTube iji mee ka ndị na-ege gị ntị na-eto eto. Efu bụ n'efu.
Vimeo - Ọ bụ # 1 ọzọ na YouTube dị ka, maka obere ego, ọ na-enye ohere iji hazie ọtụtụ ntọala (ọkachasị nzuzo), gbanwee ntọala ụfọdụ vidiyo na otu, yana karịa, ọ naghị egosi mgbasa ozi ọ bụla. Ọ dị mfe ịhazi na jikwaa. Ọ bụ ezigbo ihe ngwọta ma ọ bụrụ na usoro ị na-enyefe na-enyeghị gị nnabata Bochum a na-akparaghị ókè, yana n'ihi na (dị ka YouTube) ọ na - akwalite ogo dịka bandwit na ngwaọrụ ị na - eji. Cost: free (atụmatụ atumatu malite $ 7 / ọnwa akwadoro)
Bido Ime Ihe Omume Gị Ugbu A!
Ọ bụrụ na ị nwere mmasị na ndu miri emi na isi ngwaọrụ niile iji mepụta usoro ịntanetị na-aga nke ọma (nke ahụ na-enyere ndị na-ege gị ntị aka), gbasaa ya. Echela oge ọ bụla. Gbalịa na-eke gị online video ọmụmụ taa.
ngosi: Martech Zone na-eji njikọ njikọta na edemede a.
Tags: mgbanweigwe okwuigwe okwu lavalierEfuusoro ntanetịọzụzụ n'ịntanetịN'ezie vidiyo vidiyoihe omuma ihe omuma vidioopenhotndekọihe nchoputaihuenyosennheiserogbugbaIgwe slrntinye vidiyovideo edezi softwarenchịkọta vidioigwe okwu vidiyoihe ndekọ vidiyoọzụzụ videoVimeoyoutube